China na na na na na na na na na na na na | H & F.nylon
A na-etinye ntuziaka naịlọn na gourd Europe, nke bụ akụkụ nke kreenu, na a na-etinyekwa guider naịl na eriri maka ọ dabara adaba na gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ, ọ nwere ike ichebe eriri waya site na iyi oke, gbasaa ndụ ọrụ, belata esemokwu n'etiti eriri waya na akụkụ ígwè. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke gourd Europe ugbu a na-agbanwe nduzi Nylon maka uru ndị a na-apụghị ịgbanwe agbanwe.
Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ ụdị nke nylon guider.
MC Naịlon Guider
(Okwu zuru ezu)
Crane factory eriri onye ndu arụmọrụ ọkọlọtọ
(1) Ikike ịbanye na ịpụ eriri ahụ na-enweghị nsogbu.
(2) Ike ịpị ụdọ ahụ n'ụzọ a pụrụ ịdabere na ya nke mere na eriri waya agaghị enwe ike isi n'elu uzo gbapụ.
(3) Ikike nke ịkwaga nke ọma na ịdọzi ụdọ n'emebighị ha.
(4) Mfe nfe, disassembly na mmezi nke usoro nduzi.
(5) Ntuziaka eriri eriri ga-abụ ihe na-eguzogide ọgwụ.
(6) Gbaa mbọ hụ na eriri waya nchara nwere akụkụ ntụgharị dị iche iche na ntụgharị nke eriri igwe na-enweghị nnyonye anya dị n'etiti eriri na cylinder.
(7) Mgbe ejiri ya na ndị na - ejikọ ihe ndoli, ọ ga - enwerịrị ike ịbelata mmetụta a ga - ejedebe.
Uru nke onye na-eduzi eriri naịlọn:
(1) Zere winding nke eriri waya iji hụ na ọrụ nke ọkụ eletrik na-arụ ọrụ.
(2) endinggbatị ndụ ọrụ nke eriri igwe na-esi anwụde.
(3) Ezigbo mgbanwe na ịdị mma.
Ndị nduzi eriri ọhụrụ nwere uru pụtara ìhè karịa ndị ejiri ya rụọ ọrụ, ọkachasị n'ihe gbasara.
Nlekọta nke ndị nduzi Nylon ma e jiri ya tụnyere onye na-eduzi ọla.
(1) eriri ndu ndu ndu ndu nut, site na eriri eriri site na iji ike, abrasion eguzogide, corrosion eguzogide, njupụta, obere elu ike engineering plastik - nkedo (MC) naịlọn mgbali ịkpụzi, n'ichepụta usoro dị mfe. Nka na ụzụ arụmọrụ nke MC naịlọn dị ka egosiri na tebụl agbakwunyere.
(2) A na-ejikọ ntuziaka eriri ihu n'ihu na azụ azụ nke eriri eriri ahụ, nke dị mma maka ntinye na nkwụsị. Site na eriri eriri na ntụziaka nke eriri nwere 10Celsius oblique n'akuku, mgbe waya eriri hulatara, n'ihi na nke nkedo (MC) naịlọn nwere ike, na eriri ndu nwere ike idi ≤ 3 Celsius oblique sere.
(3) Castdị nkedo (MC) njupụta nylon dị obere, nwere mmanu na-agbanwe onwe ya nke ọma, yabụ ịdị arọ nke ndu eriri bụ ọkụ, enweghị akwa na akwa na eriri waya, nwere ike ịgbatị ndụ nke eriri waya.
(4) H-ụdị eletrik eletrik H1 isi ụdị, dị na ZBJ80013.4-89 + waya eriri eletriki usoro ule “maka ọtụtụ ule. Mgbe enweghi ike iburu onwe ya, enwere ike ịhapụ eriri waya nchara kpamkpam site na ntuziaka eriri na eriri eriri, wee rute JB / ZQ8004-89 na ogo nke ngwaahịa dị elu; N'ime ọrụ M4 gosiri maka ọrụ agwakọtara n'okpuru awa 120 nke ule ndụ, nwalee eriri eriri, na mgbakwunye na eriri si na mgbochi ahụ, pịa eriri wiilị mpaghara ahụ, enweghị mmetụta ọzọ na iji arụmọrụ nke mmebi.
(5) Ọ ga-eji ozugbo dị ka eriri ndu nke mgbawa na-àmà electric ndoli.
Nke gara aga: naịlọn ala na ngwaahịa
Osote: pụrụ iche size naịlọn njikọ
Nylon Rope Ntuziaka
Nylon Waya eriri ndu